.: ကျမ အကြိုက်ဆုံးထဲမှ ကဗျာတပုဒ်..
ကျမ အကြိုက်ဆုံးထဲမှ ကဗျာတပုဒ်..
ဟင်းနော် ထမင်းမဟုတ်ဖူး.... tag ကြောက်လို့ ပြေးနေတာဟီးး...(စတာပါ) မမ၀ါ tag လေးတောင် အကြွေးမဆပ်ရသေးဘူး...။ အကိုကြီး ဂျူဝသန် ကထပ် tag ပြန်ပြီ... မရေးခင်တော့ မမ၀ါကို အရင်းဆုံး အာဘွားပေးထားမှ .. အနှစ်သက်ဆုံး ပစ္စည်းလေးတွေ tag တင်ဖို့ ကင်မရာ ပျောက်နေလို့ ဟီးးး....။ မမရေ ထပ်စောင့်ပေးပါဦးနော်...။ တကယ်တော့ အခုတလော ဘယ်ကို မှ မရောက်ဖြစ်တာ ကြာပါပြီ..။ထူးထူးခြားခြား ကို ကြီးဂျူဝသန်က "ကျောသားရင်သား မခွဲခြားပါဘူးကွယ်။ ရရာလက်နှက် ဆွဲကိုင်လို့ တက်ခဲ့ပါ။" ဆိုတော့ ဘာတွေများဖြစ်ကုန်ပြီလဲပေါ့ ။ကမန်းကတန်း အနားမှာရှိတဲ့ ဘူးလေးထဲက သွားကြားထိုးတံလေး ဆွဲပြီးသွားတာ. ..ဟီးးး tag ကြီးဖြစ်နေတယ် (တေပါပြီ) ။ စိတ်ရှုပ်စရာ လေးတွေရှိနေလို့ ဘာလော့ကို မရောက်ဖြစ်ခဲ့တာပါ...။ ကဗျာမြင်တော့ စိတ်ဝင်စားသွားတယ် ကဗျာ ဆိုရင်တော့ တော်တော်များများ စိတ်ဝင်စားတယ်...။စည်းကမ်းချက်တွေနဲ့ ညီပြီး... နှစ်သက်တဲ့ ကဗျာလေးလဲရှိနေတော့...ချက်ခြင်းပဲကောက်တင်မိပါတယ်...။ ဒီကဗျာလေးကတော့ ကိုယ်ပိုင်ရေးထားတဲ့ ကဗျာ မဟုတ်ကြောင့်းလုံးဝ အာမ ခံပါတယ်။
ကျေးဇူးပြုပြီး အဝေးမထွက်သွားပါနဲ့ ॥
သက်ဆုံးတိုင် ခိုင်မြဲနေမယ် ॥
ကြည်နူးရီသံချိုချိုတွေပျော်ဝင် လို့♥♥မောင်♥♥ရယ် ....
♥♥မောင့်♥♥ကိုသိပ်ချစ်နေမိ တယ် ॥
ကဲအကိုကြီး ဂျူဝသန်ရေ tagကလေးကို ရေးပေးလိုက်ပြီနော်...။ မမ၀ါကို တော့ ကင်မရာ မရှိသေးတဲ့အတွက် ညီမလေးကို ခွင့်လွှတ်ပါဦးလို့ .....။
Post By ငှက်ငယ်လေး at 6:44 PM
11 ယောက်က ဒီလိုလေးတွေပြောသွားကြပြီ:
ရပါဒယ် ညလေးရယ်..း(
ညီမလေးကို မမ က နားလည်ပေးရမှာပေါ့.
စိတ်ကောင်းဘူး. မမ က မျက်ရည်လွယ်တယ်နော်.း)
ဂယ်ပြောတာ..( မမချစ်သော ညီမငယ် ငှက်ငယ်လေး
တစ်ယောက်.. ညီမလေးချစ်သော မောင်နဲ့ မခွဲမခွါလက်
တွဲနိုင်ပါစေကြောင်း မမ ကဆုမွန်ကောင်းချွေသွားပါ
နှစ်သက်မိတဲ့ (ဆရာ)တာယာမင်းဝေရဲ့ ကဗျာလေးကို ပြန်လည် ခံစားရတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပါ ညီမငယ်၊ ..
မမ ၀ါလိုပဲ ဆုတောင်းပေးကြောင်း။
ဆရာတာယာမင်းဝေ အဲဒီကဗျာရေးသွားမှန်း မသိလိုက်ဖူးဟ။ တော် ညလေး...။ ဆုတောင်းထားနော် သီလှရှင် ဝတ်ချင်လား တရားစခန်း ဝင်ချင်လား ...သင်္ကြန်ရက် ပဲနော်။
ငှက်ပိစိ ဘယ်ကနေရှာထားပါလိမ့်။ နာတောင် မဖတ်ဖူးဘူး။ ဆရာတာရာမင်းဝေရဲ့ ကဗျာတွေကတော့ အကုန်ကြိုက်တယ်ဗျ။ ဒါနဲ့ရရာလက်နက်စွဲကိုင်ခဲ့ပါဆိုတော့ သွားကြားထိုးတံလေး ဆွဲပြီးသွားတယ်ဟုတ်စ။ အင်း လောက်လောက်လားလားနဲ့အားကိုးလောက်ပေရဲ့။
ရေးသူကတော့ ပြောစရာ မလိုပါဘူး အရမ်းကို တော်ပြီသား
ကဗျာကောင်းလေး ရွေးပေးတဲ့ အတွက် :)
ဆရာတာရာမင်းဝေရဲ့ ကဗျာတော်တော်ထိတယ်။ ကောင်းတယ်။